Onye isi ala Obama kwuru n’izu a na BP amalitela $ 50 nde dollar na mgbasa ozi. Ndị Whitehouse na Onye isi ala na-agagharị na njem a, na-akatọ ụlọ ọrụ ahụ n'ụzọ ziri ezi maka itinye ego na ndị ọka iwu na azụmaahịa karịa itinye ego ahụ ebe ọzọ. Ọ bụ ezie na mgbasa ozi na-awụli elu na bandwagon, ha na-akwa emo BP Tony Hayward maka ịbụ akụkụ nke azụmahịa ọ bụla, ajụjụ ọnụ na mmekọrịta ọha na eze na telivishọn, na mbipụta na ntanetị BP
Wenezde, August 19, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Taa, ya na narị ole na ole ndị ọzọ na-ede blọgụ, ndị odeakụkọ na ndị isi ụlọ ọrụ, enwetara m ozi email na-achọghị site na Bet Brody (beth@brodypr.com) yana nkwupụta a na-ebipụta na ya banyere Jump Start Social Media Publishing a New E-Book on Social Mgbasa mgbasa ozi maka obere azụmahịa. Ọ dịghị njọ na ọ bụ SPAM, ọ na-enyekwa ndepụta nke ndị nnata na aha onye ọ bụla na adreesị ozi-e. Heard nụtụla banyere BCC? Amaghị m Bet
Ezigbo enyi Lorraine Ball, onye na-elekọta ụlọ ọrụ na-azụ ahịa Indianapolis akpọ Roundpeg, rụkọrọ m ọrụ na afọ gara aga na ndị ahịa ole na ole. Otu n'ime ihe m mụtara na Lorraine bụ ịtụnanya iru na mgbasa akụkọ ka na-enweta. Ọ bụ ihe ịtụnanya ka ọtụtụ ụlọ ahịa si ewepụta ọhụụ - na ole ole mechara banye na blọọgụ. Nke a nwere ike ibu nnukwu maka njikọ azụ, ikike, na ị nweta okwu ahụ na ụlọ ọrụ gị. Ikekwe ọ kachasị ama
Ihe omume ntụrụndụ m na-etolite, mgbe m na-abanyeghị na nsogbu, nọ na-ese. M ọbụna were a di na nwunye na afọ nke drafting ọmụmụ mgbe na High School na hụrụ ya n'anya. O nwere ike ịkọwa ihe kpatara m na-enwekarị ederede ma ọ bụ post na eserese, onye na-ese ihe osise, ihe atụ na isiokwu ndị ọzọ. Agbanyeghị na enweghị m ike mụta nwa ma ọ bụ mepụta atụmatụ dị ukwuu n'onwe m, ekwenyere m na enwere m ụtọ maka ya. M digress! Nke a bụ ntakịrị jụụ